मङ्गलबार ०७ मङि्सर, २०७८
“टिनको छाना भएका तीन/तीन कोठे दुई भवन रहेछ, दुवै भवन जीर्ण अवस्थामा रहेको पाइयो,भवनको मर्मत सम्हार गर्ने र कार्यालयको नाममा रहेको जमिनलाई तारजाली गरी संरक्षण गर्न बजेट समेत प्राप्त भएको छ”, उनले भने ।
गण्डकी प्रदेश सरकारबाट भवन संरक्षणलगायतका कामका लागि चालू आर्थिक वर्षमा रु. ५० लाख रकम प्राप्त भएको छ ।
प्रदेश सरकारले कृषिज्ञान केन्द्रको स्रोत केन्द्र संरचनात्मक सुधार कार्यका लागि रु. १० लाख विनियोजन गरेको छ भने उक्त नमूना ग्रीन हाउस निर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा रु. पाँच लाख विनियोजन गरेको प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै प्लाष्टिकको घर निर्माण गरी तरकारीखेती, नर्सरी निर्माण गरी बेर्ना उत्पादन गर्नेलगायतका योजनासमेत कार्यालयको रहेको कार्यालयले जनाएको छ । पानी पोखरी निर्माण गरी लिफ्टिङ गरी पोखरीको पानीको व्यवस्था गरिनेछ ।
उनले भने, “३०-४० गोलासहितको घार राखेर मौरीपालन गर्ने योजना छ।” पहाडी खाद्यान्न आयोजनाले करिब २०४३ सालतिर कार्यालयको उक्त जमिनमा भवन निर्माण गरे पनि भवन प्रयोगमा नआउदा जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ । रासस